I-Google Ithuthukisa Isitaki Esisha se-Bluetooth se-Android, Ebhalwe Ekugqwalweni | Kusuka kuLinux
I-Google Ithuthukisa Isitaki Esisha se-Bluetooth se-Android, esibhalwe kuRust
Ukugqwala kususelwe ngokwanda kokuthandwa ikakhulu yizinkampani ezinkulu zobuchwepheshe nezixazululo ezisetshenziswe ngezinga elikhulu. Ukulandela ukusekelwa kwayo egatsheni le-Linux-Next, indawo yokulinda i-patch ye-kernel yokuhlanganisa iwindi elandelayo, kule nyanga I-Google iveziwe kuleli sonto yini inguqulo entsha yesitaki se-Android Bluetooth, iGabeldorsche, ibhalwe ngeRust.
Lezi zindaba ziza ezinyangeni ezimbili ngemuva kokuthi iGoogle ijoyine iRust Foundation, ngoba endaweni yokugcina yamaGit equkethe amakhodi omthombo we-Android, uGoogle umemezele ukuthi inguqulo entsha yeGabeldorsche, isitaki seBluetooth esisetshenziswe ku-Android kusukela ku-11, ibhalwe kabusha Ukugqwala.
Imininingwane yephrojekthi ayisatholakali, imiyalo yomhlangano kuphela etholakalayo.
“Njengamanje, izingxenye zeRust zakhiwe ngokuhlukile ku-Android nakuLinux. Siphuthelwa ukwesekwa kweRust kuthuluzi lethu le-GN. Ngakho-ke njengamanje sakha imitapo yolwazi yamaRust… ”kusho leli thimba.
Eqinisweni, yize isetshenziswa ngokujwayelekile, I-Bluetooth isengaba ubuchwepheshe obungahambelani, nezinhlelo ezithile zokusebenza namadivayisi ukuyiphatha kangcono kunezinye. Isoftware ebhekele ukuphatha izingxenye eziningi ezihambayo zoxhumano lwe-Bluetooth ngokuvamile ibizwa ngokuthi "isitaki" se-Bluetooth.
Sekuyiminyaka, i-Android ithembele kwisitaki se- "fluoride" ngezidingo zayo ze-Bluetooth, kepha nge-Android 11, iGoogle yaqala ukuhlola isitaki esisha ngokuphelele esibizwa ngeGabeldorsche, noma i- "GD" ngamafuphi. IGabeldorsche ibilokhu ithuthuka kusukela nge-2019, kepha iGoogle yaqala ukuyikhiphela emphakathini ngo-2020.
Ngokuya nge-Google, IGabeldorsche yakhelwe ukunika uzinzo kumanethiwekhi we-Bluetooth, ngaleyo ndlela ithuthukise ukuxhumana yamadivayisi eselula ane-automation yasekhaya noma ezinye izinhlobo zamadivayisi.
“Ukuphepha kwememori kuyinselelo eqhubekayo konjiniyela be-software, ikakhulukazi labo abasebenza ngezinhlelo zohlelo. I-Google isiqalile ukusebenzisa i-Rust ezimeni lapho ukuphepha nokusebenza kwememori kuyizinto ezibucayi, ikakhulukazi ezinhlelweni ezinkulu ze-Android, ”kuchaza inkampani.
Okwamanje, ungahlanganisa yonke ikhodi yokugqwala usebenzisa iCargo. Kodwa-ke, iqembu lengeze ukuthi kunokuncika okuthile okudingekayo: kufanele ufake iphakethe le- "protobuf-compiler", ube nenguqulo yakamuva ye- "Cargo + Rust" bese usebenzisa i- "build.py" empandeni.
Kumele kuqashelwe ukuthi ngokufana ne-Fuchsia OS, kwakhiwa enye isitaki se-Bluetooth, okusetshenziselwa ukuthuthukiswa kolimi lwayo iRust.
Futhi, isitaki esisha sokuxhumana, iNetstack3, sibhalelwe iFuchsia in Rust hhayi nje kuphela ukuthi nazi izibonelo zamaphrojekthi lapho iGoogle isivele isebenzisa iRust noma ifaka isandla ku-Rust ecosystem:
Amamojula wesistimu yokusebenza ye-Android, afaka i-Bluetooth ne-Keystore 2.0.
Amaphrojekthi wezinga eliphansi njenge-crosvm virtual machine monitor (ehlukile kune-QEMU) kanye nabashayeli abasetshenziswe ku-Chrome OS.
Umnikelo kumaphrojekthi womthombo ovulekile asebenzisa iRust, njengohlelo lokulawulwa komthombo weMercurial.
I-Firmware yokusekela okhiye bokuphepha be-FIDO.
Futhi, I-Binder, inqubo ye-interprocess communication (IPC), esetshenziswa ku-Android, nayo ibhalwe kabusha kuRust, kanye nesitaki senethiwekhi esisha, iNetstack3, kubhalwe eRust for Fuchsia. Ngokuya nge-Google, i-Fuchsia uhlelo olusebenzayo lokukhiqiza umthombo olubeka phambili ukuphepha, izibuyekezo nokusebenza.
Ngokusho kwenkampani, i-Fuchsia iyisisekelo sabathuthukisi bokwenza imikhiqizo ehlala njalo kanye nokuhlangenwe nakho kumadivayisi ahlukahlukene.
"Isethi yemithetho eyisisekelo, ephephile, engathuthukiswa, ebandakanyayo kanye nepragmatic yezakhiwo iqondisa ukwakhiwa nokuthuthukiswa kweFuchsia," kubhala inkampani esizeni sayo ngohlelo lokusebenza. Ngenkathi kunezinhlaka ezihlongozwayo zokuqondisa ukwakheka kwakho, iFuchsia ngumsebenzi oqhubekayo.
Kuzwakale ukuthi kuzothatha indawo ye-Android ne-Chrome OS. Kodwa-ke, iGoogle yathi ngoJulayi 2019 ukuthi inhloso yayo bekungekhona ukufaka lezi zinhlelo ezimbili zokusebenza, kepha "bekuzama nje imiqondo emisha."
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Google Ithuthukisa Isitaki Esisha se-Bluetooth se-Android, esibhalwe kuRust
Lapho uHaskell engakwazanga ukuya khona, uRust wenza. Ukusetshenziswa kwayo kalula, i-C ++ - njenge-syntax, yize ingathandeki impela kepha iyaziwa futhi ifinyeleleka kalula, futhi ukugxila kwayo kwezokuphepha kubonakala kudonsa iso lomkhakha. Bengingalindele ukuthi ushukela uRust awengeza uzodlula i-C ++. Wayesendaweni efanele nangesikhathi esifanele.
I-Deepin 20.2 ifika ngokulungiswa, ukuthuthukiswa kokusebenza nokuningi